စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ထက်မြက်လွန်းလှတဲ့ စွမ်းရည်အပြည့်နဲ့ လှပနေတတ်တဲ့ Blackpink ရဲ့ Jennie ဟာ ချစ်စရာကောင်းရုံတင်မကဘဲ ရယ်စရာမျက်နှာအသွင်အပြင်မျိုးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။
Jennie မှာ ဒီလို moment လေးတွေရှိတယ်
ဒီလိုချစ်စဖွယ်၊ ရယ်စရာမျက်နှာအသွင်အပြင်ကြောင့်လည်း K-Pop ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အမှတ်ရစရာအခြအနေတွေအထိ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ memes ဆိုတာကတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဟာ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်တွေကို အခြေခံပြီး ဟာသပုံများအဖြစ် ဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖန်တီးခံရသူတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ကျော်ကြားသူတွေဖြစ်သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။
သူမရဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်နဲ့အတူ K-Pop လောကရဲ့ memes ဘုရင်မဖြစ်လာတဲ့ Jennie
သိပ်မကြာခင်ကာလတွေကတည်းက K-Pop Idol တွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ရမယ့်အရာဝတ္ထုတွေလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ သူတို့ရဲ့ memes တွေကလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တော်တော်လေးရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ထဲကမှ Blackpink ရဲ့ Jennie ကလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါပဲ။
ငါပြုံးနေပြီလေ၊ အခု ငါ့ကို သကြားလုံးပေးတော့
Jennie ရဲ့ memes တွေဟာ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ခ်ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဓာတ်ပုံတွေဟာ Blackpink House, Vlive (သို့) Blackpink ရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတွေထဲက ပရိတ်သတ်တွေဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပျက်စရာကြီး၊ ဘာ surprise လဲ
memes တွေမှာ အပျက်သဘောရှုထောင့်လည်းရှိသလို အပြုသဘောဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကြည့်ရှုသူတွေကို ပျော်စရာတွေပေးနိုင်ဖို့၊ လူပိုပြီး သိလာစေဖို့ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း တိုက်ခိုက်သူတွေလည်း ပိုများလာစေပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ crush ကို တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့အတူ တွေ့လိုက်ရသောအခါ
ဒီမြင်ကွင်းက ငါ့အတွက် အဆင်ပြေမနေဘူး
လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် Idol တွေရဲ့ meme တွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ ရယ်စရာဟာသဖြစ်ပြီး လူတစ်ချို့အတွက်တော့ မကောင်းတဲ့ဟာသတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင်ဆိုရင်ရော ဒီရယ်စရာဟာသဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဒီmeme ကတော့ ချစ်ခြင်းနဲ့ ဂုဏ်ယူခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်
ငါဘယ်သူလဲ?? ငါတို့အခု ဘယ်ရောက်နေတာလဲ??
Lisa ဟာ သူမရဲ့ Bangs ကို ဘာကြောင့် တစ်ချိန်လုံးချထားရတယ်ဆိုတာကို ကိုရီးယားစတိုင်လ်အတိုင်ပင်ခံရှင်းပြ
သိပ်မကြာသေးခင်က ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ Knowing Brothers အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာ Lisa ဟာ ကိုရီးယားဝမ် (၁၀) ဘီလီယံ(အမေရိကန် ၈.၉၁ မီလီယံ) လောက်မှ မရဘူးဆိုရင် သူမရဲ့ Bangs ကို ဖယ်ရှားပစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဟာသအနေနဲ့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။...